WAARE oo fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee xaaladda Soomaaliya | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA WAARE oo fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee xaaladda Soomaaliya
WAARE oo fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee xaaladda Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee dmaamulka HirShabelle, Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee looga hadlay xaaladda adag ee Soomaaliya & doorashooyinka.
Waare ayaa shaaca ka qaaday inuu daawaday kulankaasi iyo nuxurka khudbadihii laga jeediyey, wuxuuna sheegay inuu ka fahmay fariin ku socota madaxda Soomaaliyeed.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxda Soomaaliyeed si gaar ah loola hadlay, islamarkaana ay muhiim tahay inay fahmaan sida ay tahay in loo wajo xaaladda adag.
“Waxaan fiirsaday shirkii UN Security Council ee arrimaha Soomaaliya. Soomaaliya madaxdeeda waa lala hadlay. wax nin rag la yiraa waxaa ugu liita in la yiraahdo xaaskaada iyo ilmahaadu waa dan-dareysan yihiin, mana fiirsan karnee saan u dhaan,” ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka HirShabelle oo qoraal soo saaray.
Ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in loo wada istaago muxaafad & mucaarad, bad-baadinta dalka iyo dowladnimada, si xal looga gaaro khilaafka ka jira dalka.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya, iyada ergayga QM ee Soomaalida uu khudbad dheer ee uu kaga hadlay xaaladda dalka ka jeediyey kulanka golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, wuxuuna shaaca ka qaaday in haatan Soomaaliya ay ku socoto wado halis ah.
Previous articleQoraallada Villa Somalia oo uu isbeddel ka Muuqdo
Next articleJames Swan: Su’aal ayaa ka taagan Sharci Ahaansha Villa Soomaaliya Uu Ku Joogo Madaxweeynaha
Dowlada Burundi oo ka hadashay ciidamo looga diley Balcad
Xilliga la qabanayo ciyaarta final-ka degmooyinka G/Banaadir oo la shaaciyey kadib heshiiskii Khadiija iyo Filish
Fashil ku yimid Shirkii uu Iclaamiyay Farmaajo iyo Baaqii Beesha Caalamka oo dhagaha laga fureestay
SAWIRRO” Taliyaha Nabad Suggida Galmudug oo isku day dil ka badbaaday
SAWIRRO: Cumar Filish oo caawa booqday Qoyskii dadka laga dilay ugana bishaareeyay…
SAWIRO: Weerarkii lagu qaaday Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Amniga oo lasoo Afjaray…
Qarax xoogan oo goor dhow kadhacay magaalada Muqdisho iyo warar shegaayo in la la eegtay….
DEG DEG: Liiska Xubnaha cusub ee Baarlamaanka Jubbaland oo la shaaciyay (Akhriso Magacyada)
Madaxweynaha Faransiiska oo ku baaqay in wax laga badalo Midowga Europe.